Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Oktobra 2019 à 11:10
592 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Oktobra 2019 à 11:03 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Oktobra 2019 à 11:10 (hanova) (esory)
Ny teny hoe '''sobstansa''' dia teny ampiasaina ao amin'ny teolojia kristiana hiresahana momba ny fifandraisan'ny [[Andriamanitra Ray|Ray]] sy ny [[Zanak'Andriamanitra (kristianisma)|Zanaka]] ary ny [[Fanahy Masina]]. Teny nohagasina avy amin'ny [[teny latina]] hoe ''substantia'', izay nampiasaina tao amin'ny Fiangonana tandrefana miteny latina, ny hoe ''sobstansa''. Ny [[teny grika]] mifandraika aminy dia ny hoe ''οὐσία / ousίa'', izay nampiasaina tao amin'ny Fiangonana tatsinanana miteny grika. Manoloana io famaritana ny fifandraisan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina io dia niseho ny firehana sy fampianarana samihafa toy ny hômôosisma sy ny hômôiosisma ary ny heterôosisma na anômeisma.
== Hevi-teny sy dikan-teny ==
Ny Fiangonana tandrefana no nampiasa ny teny latina hoe ''substantia''. Ny sobstansan'Andriamanitra dia ny "maha izy azy an'Andriamanitra", ny fototra maha-Andriamanitra an'Andriamanitra, ny tsy itovizan'Andriamanitra amin'ny zavatra noforonina. Ampiasaina ny teny hoe ''substantia'' rehefa hanao fampisampanan-teny ka ahazoana ny hoe ''consubstatialita'' (latina). Mitovy ''substantia,'' hoy ny mpanohana ny Trinite, ireo [[Persona (teolojia)|persona]] telon'Andriamanitra ka izany fitovian'ny substantia izany no atao hoe ''consubstatialita''. Ny Fiangonana tatsinanana dia nampiasa ny teny grika hoe ''ουσία'' / ''ousia'', izay mitovy hevitra amin'ny teny latina hoe ''substantia''. Ilay atao hoe ''consubstatialita'' amin'ny teny latina dia atao hoe ''ὁμοούσια'' / ''homoousia'' amin'ny teny grika.
Ao amin'ny fanekem-pinoana nikeana ampiasain'ny [[Protestantisma eto Madagasikara|fiangonana protestanta malagasy]] dia izao no voasoratra: "miray Sobstansa (izay maha-Izy Azy) amin'ny Ray", fa ao amin'ny fiekem-pinoana niseana ampiasain'ny [[Eglizy Katolika Apostolika Romana (Madagasikara)|fiangonana katolika]] malagasy dia ahitana ny hoe "iray fomba amin'ny Ray".
=== Ny hômôosisma ===
Ny hômôosisma dia fampianarana izay ilazana fa mitovy sobstansa amin'ny Ray ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ka noho izany dia Andriamanitra ny Ray, Andriamanitra ny Zanaka ary Andriamanitra ny Fanahy Masina. Tsy andriamanitra telo anefa ireo fa Andriamanitra tokana. Tamin'ny [[konsily voalohany tao Nikea]] tamin'ny taona 325 no nampidirana izany tao amin'ny fampianaran'ny Fiangonana. Tamin'izany no nanamelohana ny fampianaran'i Ariosy. Nohamafisina tao amin'ny konsily manaraka maro izany sady noraketina tao amin'ny [[fanekem-pinoana]] kristiana maro, indrindra ny [[fanekem-pinoana nikeana]]. Izay rehetra tsy nanaraka ity fampianatrana ity fa nanao fampianarana hafa momba ny sonstansan'ny Ray sy ny an'ny Zanaka ary ny an'ny Fanahy Masina dia nampangaina ho nanao fampianaran-diso ka natao hoe heretika.
Ny Zanaka izay nateraky ny Ray dia miray sobstansa na iray fomba amin'ny Ray, ary ny Fanahy Masina izay nivoaka avy amin'ny Ray dia miray sobstansa na iray fomba amin'ny Ray koa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/975769"